Eidoo Hybrid Exchange - Tray News - Blockchain News
Febroary 25, 2018 Admin
Eidoo mitondra Hybrid Exchange sy Multicurrency Wallet ho an'izao tontolo izao ny Cryptocurrency
Izao tontolo izao ho toy ny crypto mitsaha-mitombo, dia lasa mazava fa tsy ho iray amin'izao rehetra izao cryptocurrency. Raha Bitcoin dia iray amin'ireo malaza indrindra nomerika vola, Ethereum haingana dia haingana tany fahazoana.
Ohatra, vao haingana ny tatitra nataon'i Weiss dia voasokajy Ratings ampolony cryptocurrencies mifototra amin'ny mari-pandrefesana maro, ary Ethereum efa nahazo ampy ambony noho Bitcoin. Fa raha cryptocurrencies Ethereum sy ny hafa dia lasa tsara kokoa, crypto ny tompony izao iray mila fampiharana hanararaotra ny ara-bola vokatra rehetra eo amin'ny toerana iray.
Soisa startup Eidoo no voavaha ity olana amin'ny alalan'ny famoronana fampiharana finday izay manompo ho toy ny kitapom-bola ho nomerika Bitcoin, Ethereum sy ny famantarana ERC20. Ankoatry ny, Eidoo miasa toy ny mifangaro fifanakalozana izay mamela ny mpampiasa azy mivarotra, mividy, hamoaka sy niova fo cryptocurrencies amin'ny sehatra.
Notsorina blockchain fifandraisana
Eidoo mikendry mba hanatsorana ny fifandraisana eo Blockchain sy ny mpampiasa mba hifantoka amin'ny cryptocurrency. Eidoo manao izany amin'ny fanomezana mora-to-fampiasana fampiharana miaraka amin'ny “olombelona-to-blockchain” interface tsara natao ho an'ny rehetra cryptocurrency zavatra ilaina. Izany dia hahatonga ny be pitsiny ny crypto mora kokoa ny mitantana izao tontolo izao.
Ny iray amin'ireo fototra mahasoa ny Eidoo dia miadana-of-fampiasana tsotra dia mifototra amin'ny fanaraha-maso sy ny. Vantany vao misintona mpampiasa ny Eidoo Mobile App, dia afaka aoriana ny rehetra ny multi-pananana fitantarana sy ny adiresy ary koa ireo fanalahidy sonia. Eidoo Manamora sy miaro mpanjifany ny mamela ireo mpampiasa mba miditra ny cryptocurrencies ao amin'ny toerana miaraka amin'ny tenimiafina ahitana 12 teny. Ao amin'ny vonjy taitra, Eidoo ihany koa ny manolotra “famerenana fitaovana” izay mamela ireo mpampiasa mba mora manome ny famantarana.
Ankoatry ny, Eidoo dia nanambara tao amin'ny lahatsoratra bilaogy izay ny Eidoo kitapom-batsy ho ela lasa “hypersmart” amin'ny alalan'ny fampidirana fahaizana artifisialy algorithms avy amin'ny orinasa Soisa ORS SA. Izany dia mamela ny mpampiasa Eidoo avy hatrany hampiasa AI algorithms rehefa mampiasa vola raharaham-barotra sy ny fananany crypto mifototra amin'ny ny tiany sy ny mety mombamomba.
Fomba iray hafa ny manavaka ny tenanao amin'ny hafa malaza crypto fifanakalozana vola avy hatrany dia ny mahita famantarana ERC20. Araka ny taratasy fotsy Eidoo, amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao ny hampihatra tsy manam-paharoa anarana sy ny fanehoana an'ohatra amin'ny ERC20 famantarana, izay midika fa ny mpampiasa dia afaka mamorona vaovao famantarana izay manana anarana mitovy na famantarana toy ny efa misy iray. Na izany aza, izany dia lasa olana ho mora sy azo antoka ny fampiasana ny kitapom-batsy. Ny Eidoo kitapom-batsy mamaha io olana amin'ny alalan'ny fametrahana manokana fanondroana fa ny vondrona famantarana navoakan'ny orinasa miaraka amin'ny famantarana ara-dalàna. Famantarana izay tsy tafiditra ao ity dia marika manokana toy ny fanondroana “untrusted” mba hanampiana ny olona tsy hosoka.
A safiotra fifanakalozana
Ankoatra ny multi-bola ny kitapom-batsy, Eidoo manompo toy ny safiotra tahiry tsena izay tokony hanomboka amin'ny herinandro ho avy. Amin'izao fotoana izao, ekipa roa – Ethereum ny ekipa sy ny ekipa Bitcoin – miasa eo amin'ny fampiharana sy nivoatra ny Eidoo fifanakalozana.
Ny mpivady voalohany ny cryptocurrencies hita ao amin'ny Eidoo Exchange dia Edo / Ita (Edo no famantarana ny Eidoo). taty aoriana, ERC20 famantarana tsiroaroa no voalaza ho nanomboka.
Ny rafitry ny Eidoo mifangaro Exchange mamela ny mpampiasa azy mora foana fanaraha-maso tanteraka ny vola. User kaonty dia mifototra amin'ny fifanarahana manan-tsaina avy Ethereum izay famantarana voapetraka. Izany manakana ny fifanakalozana tsy hanam-tsy nahazoan-dalana fidirana ho any amin'ny mpampiasa mpandraharaha. Ethereum Smart Contracts koa ampiasaina mba hanorim-ponenana sy mamarana po.
Ny Eidoo Exchange koa dia mampiasa ny eny-rojo mba boky sy ny lohamilina hanome mpampiasa farany tamin'ny mahazatra fifanakalozana traikefa ny nentim-paharazana. Ireo mpampiasa dia afaka mamorona baiko maro ho toy ny varotra fifandanjana mamela, ary izy ireo dia tsy ho voampanga mandra-baiko dia mihavana sy novonoina tamin'ny Ethereum (mahay mijery fifanarahana fampihavanana).
Ity dingana ity dia manampy manome sehatra maro ny filaminana raha fampihenana ny vola lany amin'ny entona ao amin'ny rojo. Izany dia mampiseho ny fomba fomba iray mifangaro amin'ny hoavy dia ho tsara scaling vahaolana ho an'ny fifanakalozana.
Toy ny amin'ny sehatra fitongilànana, varotra eo anaty fitoeram-bola ihany koa ny tokony hanana atomika swaps. Midika izany fa ny asa ara-barotra ihany no afaka maka toerana tanteraka amin'ny fifanakalozana; Raha tsy izany na inona na inona hitranga.
Ihany koa Tsara homarihina fa ireo mpampiasa izay manokatra ny Eidoo takalon 'ny voalohany dia ho angatahana mba hanao raharaham-barotra kely Ita handrakotra Ethereum Blockchain saram sy mampihetsika ny Smart Fifanarahana mba hahatonga ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny tantara hahatonga.
Toy ny multi-vola sy ny kitapom-batsy mifangaro fifanakalozana tsy ampy, Eidoo mikasa ny fampiharana ny tsena sy ny debit décentralisées karatra ho ela. Izao tontolo izao ho toy ny crypto evolves, Eidoo dia manaiky ny maha zava-dehibe ny fanatsarana na ny teknolojia sy ny mpampiasa traikefa mba hahatonga ny cryptocurrency mahazatra ary mora.
Merry Christmas everyone, in T ...
Previous Post:Putin: Rosia mila hampandrosoana ny crypto sy blockchain teknolojia
Next Post:Large homebuilder tany Irlandy hanaiky Bitcoin
SHARAN hoy i:
March 4, 2018 amin'ny 7:31 PM
Well I like what you said, As a junior i want some suggestion. Check my video. Misaotra
Marg Leiding hoy i:
March 9, 2018 amin'ny 6:27 PM
Wonderful goods from you, olona. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific web site.